लन्डन। हेर्न, पढ्न र माया गर्न एक अद्वितीय शहर वर्तमान साहित्य
लन्डन। हेर्न, पढ्न र माया गर्न एक अद्वितीय शहर
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास, रोमान्स उपन्यास, कविता, कथाहरू, थिएटर, आतंक
लन्डन। वेस्टमिन्स्टर ब्रिज र साउथब्याक बुक मार्केट। 1995-2012-2015
डाक्टर शमूएल जॉनसन (१1709० -1784 -१XNUMX) भने जो लन्डनबाट थाकेका थिए, जीवनबाट थाकेका थिए। तर अर्को महान अंग्रेजी कवि, पर्सी ब्याशे शेली (1792-1822), त्यो लेखियो नरक लन्डन जत्तिकै शहर हो। म, जो म मात्र हुँ, यसो भन्छु कि हरेक पटक म लन्डनमा सीधा कदम बढेको छु म खुसी छु। दुबै उमरे पर्यटकको रूपमा र त्यहाँ बस्दा जब मैले केही समयको लागि गरें।
यसको इतिहास, यसको वातावरण, यसको गन्ध, यसको हजार कुनाहरू ती हजारौं त्यस्ता कथाहरू पुन: निर्माण गर्न तपाईलाई नेतृत्व गर्छन्। र तीनिहरू तपाईंलाई सिर्जना गर्न प्रेरणा दिन्छन्। त्यो वेस्टमिन्स्टर ब्रिजले त्यस्ता भर्खरका महिमा र दुर्घटनाहरू देखेको छ। र सयौं विश्वव्यापी र स्थानीय शीर्षकहरू सहित साउथ बैंकमा त्यो लोकप्रिय पुस्तक बजार। आज म उल्लेख गर्न चाहन्छु यस शहर को बारे मा केहि पुस्तकहरु र सबैलाई भ्रमण वा फर्कन आमन्त्रित गर्नुहोस्। कुनै अधिक कारण छैन। यो लन्डन हो.
हुन्छ एक सूची बनाउन असम्भव लन्डनले उत्प्रेरित गरेको वा यसमा उल्टिएका थुप्रै कथाहरू। साहित्यमा विशाल नामहरूमध्यम र सानो। बेनामी वा एमेच्योर लेखकहरू कि हामी एक शब्द, एक वाक्यांश वा एक छवि पाउन। शहर थाहा नहुनु पनि।
किनभने कसले ती पार्टीहरूको हलमा नाच गरेन जुन ड्यासवुड बहिनीहरूले भाग लिएका थिए en भावना र संवेदनशीलता? कसले देखेको छैन वा कल्पना गरेको छैन डिकेन्स लन्डन? कसको चिहान भित्र गएन? हाइगेट र तपाईले सोच्नु भएन कि तपाईको छाया देख्न सक्नुहुन्छ लुसी वेस्टनरा?
1 लन्डन - एडवर्ड रदरफर्ड
2 घुसखोर - स्टीफन छाला
3 लन्डन कथाहरू - डोरिस लेसिंग
4 लन्डनका मानिस - जर्जस सिमेमन
5 लन्डनका कथाहरू - एनरिक गोन्जालेज
6 समाप्त गर्न
लन्डन - एडवर्ड रदरफर्ड
हुनसक्छ शीर्षक सबै भन्दा राम्रो परिचित (र भारी) यस शहरलाई आफ्नोबाट भिज्नका लागि आधार को एक बमोजिम गर्न एक सानो सेल्टिक बस्तीमा दोस्रो विश्व युद्ध, को सैन्य को आक्रमण को माध्यम बाट जाँदै CESAR BC 54 ईसापूर्वमा, धर्मयुद्ध, नॉर्मन्स, को सृष्टि विश्व, थिएटर जहाँ शेक्सपियरले उनका नाटकहरूको प्रीमियर गर्थे धार्मिक तनाव, the ठूलो आगो १1666 बाट, भिक्टोरियन युग ... धेरै कथाहरू जुन वास्तविक र काल्पनिक पात्रहरू मिसिन्छन्, जो केहि सम्बन्धित छ परिवार सागास जुन शताब्दीहरूमा निरन्तर रहन्छ।
घुसखोर - स्टीफन छाला
La पहिलो उपन्यास एजेन्ट श्रृंखलाबाट दान शेफर्ड, यो स्पाइडरको रूपमा पनि चिनिन्छ। स्टीफन छाला एकदम राम्रो गरीयो लन्डन अंडरवर्ल्डको तनावपूर्ण र बिरुवायुक्त वातावरण र शेफर्डलाई पासोले भरिएको खेलमा राख्छ जुन सस्पेंस अन्त्य सम्म जारी रहन्छ।
लन्डन कथाहरू - डोरिस लेसिंग
बेलायती लेखक, पुरस्कार साहित्य मा नोबेल पुरस्कार दश बर्ष पहिले, त्यो दृश्य सेट गर्न बीसौं शताब्दीको अन्तमा अशान्ति, मोटली र बहुजातीय लन्डनमा गयो। अठार कथाहरू त्यो कथाहरूको यस खण्ड बनाउँछ।
कम उनको मनपर्ने थिम मा एक छोयो: अ b्ग्रेजी पूंजीपति वर्गको महत्वपूर्ण चित्र। यी कथाहरूमा कठिनाइ, अनुभव र पारिवारिक सम्बन्ध र प्रेम सम्बन्धहरू समावेश भएको धेरै आश्चर्यहरू छन्, ब्रिटिशको पृष्ठभूमिको रूपमा अधिवेशनको महत्त्वको साथ।
लन्डनका मानिस - जर्जस सिमेमन
सिमेमन लेख्यो लन्डनको मान्छे १ 1933 .XNUMX मा, उनका पहिलो शीर्षक लोकप्रिय उपन्यासहरू पछि गम्भीर मानिन्छ जुन त्यतिबेलासम्म त्यति सफल भएको थियो।
एक जाडो रात, डिप्पेको फ्रेन्च पोर्टमा, रेलवे स्विचम्यान, लुइस मालोइन एक जहाज को आगमन हेर्नुहोस्। तर ऊ दृश्यलाई साक्षी दिनेछ जसले उसलाई उल्टो पार्छ। एक जना मानिस सुटकेसलाई अ h्गालो हाल्दै पानीमा खसे जब उसको हत्यारा अन्धकारमा भागे। मालोइनले गोदीको पानीमा डुबाउने र सुटकेस पुन: प्राप्त गर्ने निर्णय गर्दछ। जिज्ञासाले उसलाई जित्यो र ... सुटकेसका सामग्रीहरूले उसको सास फेर्दछ। कुरा धेरै जटिल हुन्छ जब केही दिन पछि उसले हत्याराको उपस्थिति पत्ता लगाउँदछ।
लन्डनका कथाहरू - एनरिक गोन्जालेज
एनरिक गोन्जालेज, पत्रकार जो लन्डनका लागि पत्रकार थिए देश, उहाँले हामीलाई रल्स अनुभव, कथा र पात्रहरू यो समयमा त्यहाँ थियो। धेरै व्यक्तिगत र रमाइलो शीर्षक।
यसले शीर्षक, क्षण वा कथाले केही फरक पार्दैन। जे पनि उसले यो शब्द लिनोस् लन्डन छापिएको योग्य छ ध्यान.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » लन्डन। हेर्न, पढ्न र माया गर्न एक अद्वितीय शहर
हामी किन लेख्छौं?